Maraykanka oo ka hadlay xaaladda Khashoggi – AwKutub News
Maraykanka oo ka hadlay xaaladda Khashoggi
Leave a Comment on Maraykanka oo ka hadlay xaaladda Khashoggi
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa ugu baaqay Sacuudiga inay taageeraan baaritaan cad oo lagu sameeyo suxufiga la la’yahay ee Jamal Khashoggi, kaasi oo aan la arkin tan iyo markii uu toddobaadkii tagey galay qunsuliyadda dalkaas ee Istanbul.
“Waxaan aragnay warar is-diidan oo ku saabsan ammaanka iyo halka uu jiro suxufiga caanka ah ee qoraalada ku daabaci jiray Washington Post, Jamal Khashoggi” ayuu yiri Pompeo oo bayaan soo saaray xilli dambe oo Isniintii ah.
Turkey ayaa isniintii dalbatay fasax ay baaritaan ugu sameyso gudaha safaaradda, ayada oo raadineysa tilmaamo la xiriira suxufiga. Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa toddobaadkii tagey sheegay inuu soo dhoweynayo in Turkiga ay baaraan dhismaha qunsuliyadda.
Si kastaba, waxaan caddeyn in yaboohaas uu weli taagan yahay, kadib markii Sacuudiga arrin aan “sal lahayn” ku sheegeen hadalka saraakiisha Turkiga ee ahaa in Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda.
Tags: Maraykanka Sacuudiga Turkiya Wararka
Previous Entry Ra’iisul Wasaare Kheyre oo u dhoofay Boqortooyada Sacuudiga
Next Entry ​4 tallaabo oo aad ku xoojin kartid kalsoonida naftaada